Muxuu Ahaa Warka Naxdinta Leh Ee PFA La Kulmeen Intii Lagu Guda Jiray Xanuunka Coronavirus? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Ururka xirfadlayaasha ciyaartoyda kubbada cagta England ee Professional Football Association oo loo soo gaabiyo PFA ayaa soo bandhigay arin naxdin leh ay la kulmeen intii lagu jiray xaalda go’doonka coronavirus.
Ururka ciyaartoyda kubbada cagta England ee PFA ayaa shaaciyay in ciyaartoy ka badan 250 ay la soo xidhiidheen iyaga si uga caawiyaan xaalad isku buuq ama dhibaato maskaxiyan ah, waxaayna ciyaartoydani iskugu jiraan horyaalada kala duwan ee England.
PFA ayaa sanad kastaba ciyaartoy badan ka caawin jiray in ay xaaladooda caafimaad ee dhinac maskax ahaan wax kala qabtaan laakiin tirada muddadii coronavirus ay caawiyeen ayaa noqotay mid layaableh.
Sida xogtan ururka ciyaartoyda kubbada cagta England ee PFA lagu shaaciyay waxaa caawin dhinaca maskaxda ah ka soo dalbaday 258 ciyaartoy oo iskugu jira horyaalada kala duwan ee England.
PFA ayaa sameeyay xog cilmi baadhiseed oo lagu ogaanayay xaalada maskax ahaan ee ciyaartoyda kubbada cagta England, waxaana lagu ogaaday xaalada ciyaartoyda waxaana la waydiinayay haddii ay qabaan dhibaato ka soo gaadhay isku buuq maskaxiyan ah, dhibaato alcohol ama khamriga ama dhibaato dhinaca khamaarka ah.
Sida xogtan lagu cadeeyay tirada ciyaartoyda maska xahaan iskugu buuqay dhawrkii todobaad ee coronavirus ay go’doonka ugu jireen ayaa boqolkiiba 40% ka ah guud ahaan tirada ciyaartoydii sanadkii 2019 uu PFA ka caawiyay in ay galeen xaalado isku buuq maskaxeed markaas oo ay tiradu ahayd 653 halka sanadkii 2018 kii ay ahayd 438.
Laakiin waxaa muddo kooban lagu diwaan galiyay tiradii ugu badnayd ee ciyaartoy ah oo dhibaato maskaxeed soo gaadhay kuwaas oo caawin uga baahday PFA.
Ciyaartoyda ay soo gaadhay dhibaatada maskax ahaan intii lagu jiray go’doonka coronavirus waxay iskugu jiraan ciyaartoyda horyaalada Premier League, Championship, League One , League Two –si la mid ah horyaalka dumarka ee Women’s Super League.
Dhinaca kale waxaa xogtan lagu cadeeyay in 64 ciyaartoy oo ka mid ah liiskani ay yihiin ciyaartoy ka ciyaaraha horyaalka Premier League oo muddadan la kulmay dhibaato isku buuq dhinaca maskaxda ah.
Waxaa xogtan lagu cadeeyay in 13 ciyaartoy ay yihiin kuwo halis wayn ku jira iyada oo PFA uu xaalada ciyaartoyda ay masuulka ka yihiin ay ka caawinayaan sidii maskax ahaan looga taageeri lahaa in ay xaaladan xun ka soo baxaan.
Si kastaba si loo ilaaliyo xogta xaasaasiga ah ee ciyaartoyda lama shaacin magacyada iyo kooxaha ay ka tirsan yihiin balse dhawrkii todobaad ee go’doonka coronavirus ayaa saamayn xun ciyaartoyda ku yeeshay.
Ma la yaabani hadii uu Klopp ka tagayo Liverpool, “ wuu bixi karaa ka hor inta uusan heshiiska dhameystirin, ayuu yiri McAteer.